Madaxweyne Erdogan oo uga digay dowladda Netherland in ay cawaaqib xumo kala kulmi doonto is-hortaag ay ku sameeyeen labo kamid ah wasiiraddiisa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMadaxweyne Erdogan oo uga digay dowladda Netherland in ay cawaaqib xumo kala kulmi doonto is-hortaag ay ku sameeyeen labo kamid ah wasiiraddiisa
March 12, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ankara-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa uga digay dalka Netherland in ay cawaaqib xumo kala kulmi doonaan ayna dhaawici doonto xiriirka labada dal u dhaxeeya kadib markii labo wasiiradiisa kamid ah la hor istaagay.
Erdogan ayaa yiri: “waxaan bari doonaa iyaga diblomaasiyada caalamiga ah.”
Labada wasiir oo Turkiga ah ayaa laga hor istaagay Sabtidii shalay in ay u khudbeeyaan qurbajoogta Turkiga ee kunool magaalada Rotterdam ee dalka Netherland, iyadoo mid kamid ah loo galbiyay xuduuda Jarmalka.
Dowladda Netherland ayaa sheegtay in isku soo baxaan oo kale uu dab ku sii shidi doono maalmo kahor doorashada guud ee Netherland.
Wasiiradda Turkiga ayaa doonayay in ay taageero ka helaan qurbajoogta Turkiga iyadoo ay soo aadantahay aftida awood kordhinta madaxtooyada Turkiga.
Wasiiradda qoyska Turkiga Fatma Betul Sayan Kaya, ayaa booliiska Dutch gaari ku geeyeen xuduuda dhanka Jarmalka xigta.
Turkiga ayaa 16-ka bisha April ee sanadkan qaban doona aftida wax ka bedelka dastuurka, iyadoo loo codeyn doono in dalka uu noqdo mid awooda uu leeyahay baarlamaanku ama madaxtooyadu.
Waxaa jira in ka badan 5.5 milyan oo qurbejoog Turki ah, xukuumada Madaxweyne Erdogan ayaa doonaysa sidii ay ku heli lahayd codadka dadkaas.
Netherlands waxaa ku nool 400,000 dad ah oo asal ahaan kasoo jeeda Turkiga, waana kuwaas kuwa xukuumada Ankara ay dadaalka ugu jirto in ay soo jiidato codadkooda.
August 9, 2016 Madaxweyne Erdogan oo u safray Ruushka si uu u soo cesho xiriirkii labada dal
August 7, 2016 Banaanbax lagu taageerayo jawaabtii dowlada Turkiga ay ka bixisay isku-daygii afgembiga fashilmay oo ka dhacay magaalada Istanbul
April 20, 2017 Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo bisha soo socota kulmi doona
Exclusive: Puntland Mirror investigates serious irregularities and alleged corruption in Garowe City Tree Plantation project
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday maanta oo Isniin ah saldhig ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya oo ku yaala koonfurta galbeed ee Muqdisho. Sarkaal katirsan ciidamada militariga Soomaaliya oo la hadlay wakaalada wararka Reuters [...]